TCDD 38 Ngwa Ngwa na oge maka ndị mmadụ nchịkọta
The Republic of Turkey State Railways TCDD, obere aha na a maara, ndị State Personnel mbanye advertisement bipụtara site Presidency. Dịka ọkwa ọkwa nke ndị ọrụ TCDD e bipụtara, ngụkọta nke ndị ọrụ 38 ga-arụ ọrụ na obodo dị iche iche maka ụdị azụmahịa dị iche iche [More ...]
Site na ọkwa ọkwa na nchịkọta 2019 / 1 KPSS, 13 ndị ọrụ ọha na eze gụsịrị akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ sekọndrị na-akpọga na General Directorate nke State Railways (TCDD). Kedu ihe a chọrọ iji nweta TCDD 13? 2019 / 1 KPSS bipụtara OSYM na nduzi kachasị mma [More ...]
TCDD Transportation Inc. Nchịkọta KPSS akara n'enweghị ihe ndị ọkachamara na-arụ ọrụ ga-akwụ ụgwọ. Ndị Candidates ga-esonye na listi a ga-agwa gị site na İŞKUR ga-edozi akwụkwọ na ụbọchị 08.08.2019-09.08.2019. Ndị Candidates ga-edozi akwụkwọ ahụ n'onwe gị. Inye akwụkwọ na ịnakwere akwụkwọ [More ...]
Ụgbọ njem TCDD ga-enwetata ndị ọrụ nkwupụta na ndị ọrụ nkwarụ
TCDD Transportation Inc. abanyela ọkwa maka ndị ikpe mara na ndị nwere nkwarụ. Ndị Candidates ga-esonye na listi ikpeazụ nke İŞKUR dịka ọkwa KPSS score, na fotocopies nke akwụkwọ ndị e depụtara n'okpuru iji banye nyocha nke ọnụ [More ...]
TCDD ga - anata ndị ọrụ 38 na-enweghị KPSS
Enyere site na Republic of Turkey State Railways mara ọkwa ngụkọta ọhụrụ mgbasa ozi ga-eme ka 3 38 mkpara na n'ikuku. Ị nwere ike ịchọta ọnọdụ ngwa na nkọwa ndị ọzọ na ozi na-esonụ. Na ọkwa ahụ bipụtara "akara KPSS na General Directorate anyị na-enweghị mkpa maka ịbịakọta ndị ọrụ igwe [More ...]
The Republic of Turkey State Railways (TCDD) na zitere ndepụta ka e site ISKUR maka 356 ọrụ ebe ọrụ, ihe ndị a chọrọ kpọmkwem na nku TEO mara ọkwa, na akwụkwọ a chọrọ nnyefe ụbọchị nke onu nyochaa-aga ime ndị na-mara ọkwa. The Republic of Turkey State Railways (TCDD) n'ebe ọrụ [More ...]
TÜLOMSAŞ mara ọkwa ịrịọ akwụkwọ maka nchịkọta
Turkey Locomotive na Engine Industry (TÜLOMSAŞ) site a ọhụrụ na-adịgide adịgide mbanye mara ọkwa na-ebipụta na kacha ịga nke ọma nke na-aga ime na ndepụta nke rịọrọ akwụkwọ na mbanye usoro na ụkpụrụ na usoro e mara ọkwa. Turkey Locomotive na [More ...]
TÜLOMSAŞ Ọrụ bụ Staffed!
Turkey Locomotive na Engine Industry Corporation General Directorate (TÜLOMSAŞ) ga-mara ọkwa na mgbasa ozi bipụtara 3 Total na-adịgide adịgide-arụ ọrụ. Ngalaba anyị na-adịgide adịgide ga - enweta nkeji Tır 3. Ọrụ, nchịkọta na ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ [More ...]
TCDD 356 Onye ọrụ ịzụta gbanwere ihe ntinye akwụkwọ nyocha akwụkwọ edemede!
TCDD 356 Ọrụ nchịkọta ndị ọrụ na-etinye aka na ntinye akwụkwọ ọkwa ọkwa ọkwa! Republic of Turkey State Railways (TCDD) dị na nkọwa kọwara random Olee ẹkenịmde iji chọpụta ndị mbanye nke na-aga ime na onu udomo oro 356 aha ememe, ma ihe [More ...]
The Republic of Turkey State Railways (TCDD) ebighị ebi oge n'ebe ọrụ (na-adịgide adịgide) na-agba ọsọ site na ọrụ nkwekọrịta; 86 Na-azụ Generator, 42 Rail Road Construction, Nyocha na Ndozi na-arụ ọrụ ndị ọrụ, 188 Railway Line Maintenance Repairer, 40 Port Crane [More ...]
TÜVASAŞ iji nweta ndị nwere nkwarụ
Turkey n'ụgbọala Industry (TÜVASAŞ) na mgbasa ozi bipụtara TEO n'elu 1 Total igwe technology ẹkesikpede a mara ọkwa na n'ọrụ mkpara na nkwarụ. TEO n'elu Turkey na mgbasa ozi bipụtara alụmdi n'ụgbọala Industry Machine Technology ka n'ọrụ dị ka a ọkachamara [More ...]
TÜLOMSAŞ New Development na Staffing!
Turkey Locomotive na Engine Industry Inc. A mara ọkwa ọhụụ na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị na akwụkwọ ndị a chọrọ n'aka ndị na-aga ime ihe banyere ọkwa nke ndị ọrụ na - adịgide adịgide mara ọkwa. Ihe nchịkọta okwu na onye nkụzi nke İŞKUR [More ...]
Ngwa ndị a ga-eme ka İŞKUR na usoro 356 na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ n'ime Turkish State Railways (TCDD) na-agwụ taa. Kedu ka esi etinye maka ndị ọrụ TCDD na İŞKUR? İŞKUR TCDD ọrụ mbanye ngwa chọrọ [More ...]
Turkey Locomotive na Engine Industry Corporation General Directorate nke ọha na eze anya mbanye 40 8 site ikenye TULOMSAS ngwa e bipụtara ukara Gazette dere April 2019. TÜLOMSAŞ obodo ọrụ mbanye ngwa nkọwa. TÜLOMSAŞ General Directorate [More ...]
Republic of Turkey General Directorate of State Railways TCDD ga-amalite na-eche mgbe 356 nke ngwa maka mbanye nke na-aga ime, nwekwara ụba na search maka ọnọdụ. Ònye nwere ike ide maka 356 nbanye? Onye ọrụ TCDD NA-ECHICHE NDỊ NA-ECHICHE [More ...]
Turkey TCDD General 356 April Labour na Personnel Amalite!
Na ọnwa ndị na-adịbeghị anya, TCDD ekwuputala na ọ ga-eburu onye ọrụ ọrụ. Ndị isi oche nke State Railways ga-ebipụta ndị ọrụ 356 na nchịkọta nke ndị ọrụ na mpaghara dị iche iche na-enweghị iwu KPSS. Ngwa maka April [More ...]
Ka ụlọ ọrụ ahụ na-eje ozi na Eskişehir nyere gị ọrụ, a ga-azụ ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọala. ESTRAM Light Ụgbọ okporo ígwè Ụgbọ njem San. Tic. Ụlọ ọrụ dị n'ime ala Eskişehir [More ...]
Havaist kwupụtara ọkwa nke 100 ndị njem si ISKUR
A tọhapụrụ onye ọkwọ ụgbọala XMUMX site n'aka ISKUR ka ọ rụọ ọrụ n'ime Havaist Taşımacılık nke bụ njikọ nke Istanbul Metropolitan Municipality. Istanbul Metropolitan Municipality, a enyemaka nke Istanbul Busses ụlọ ọrụ Inc. [More ...]
Ochichi General of the State Railways (TCDD), nyocha nke 353 site na ISKUR. 2019 Ngwa maka nchịkọta nke onye ọrụ TCDD 25 kwụsịrị na January. Ya mere ole mgbe ka ndị ọrụ TCDD ga-anwale ule okwu? Ụgbọ okporo ígwè nke obodo (TCDD) [More ...]